Telo amin'ny firaisan-kina | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Soisa - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Switzerland
Telo ao anatin'ny firaisana izay lazain'ny Baiboly hoe "Andriamanitra" dia tsy midika hoe mpitovo iray amin'ny heviny hoe "antitra izay misy volo lava sy fotsy" izay antsoina hoe Andriamanitra. Ny Baiboly dia manaiky an'Andriamanitra izay namorona antsika ho firaisan'ny olona telo samy hafa na "samy hafa", dia ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny ray tsy zanakalahy ary ny zanaka tsy ray. Ny Fanahy Masina dia tsy ny ray na ny zanakalahy. Na dia samy manana ny toetrany manokana aza izy ireo dia mitovy ny tanjony, ny finiavana ary ny fitiavana iray ihany, ary manana ny maha izy azy sy ny iray ihany (Genesisy 1:1; Matio 26:28; Lioka 19: 3,21-22). Ireo olona telo Andriamanitra dia tena akaiky sy zatra mifankahalala ka raha mahalala olona iray isika dia mahalala olona iray hafa. Izany no mahatonga an'i Jesosy hanambara fa iray ihany Andriamanitra ary tokony hitadidy izany isika rehefa miteny fa misy Andriamanitra iray ihany (Marka 12,29). Ny mieritreritra fa ny olona telo an'Andriamanitra dia zavatra tsy latsaky ny iray dia hamadika ny firaisana sy ny firaisan'Andriamanitra! Andriamanitra dia fitiavana ary midika izany fa Andriamanitra dia manana fifandraisana akaiky (1 Jaona 4,16). Noho io fahamarinana momba an'Andriamanitra io dia antsoina hoe "Andriamanitra tokana" na "Andriamanitra tokana" Andriamanitra. Ny trinity sy ny trinity dia samy midika hoe "telo ny firaisana". Rehefa miteny ny teny hoe "Andriamanitra" isika dia miresaka olona telo samihafa ao anaty firaisana - ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina (Matio 3,16-17; 28,19). Mitovitovy amin'ny fomba fahazoantsika ny teny hoe "fianakaviana" sy ny "ekipa". «Ekipa» na «fianakaviana» miaraka amina olona samihafa, saingy olona mitovitovy. Izany dia TSY midika hoe misy andriamanitra telo satria Andriamanitra tokana dia Andriamanitra, fa misy olona telo samihafa ao amin'ny IRAY iray dia Andriamanitra (1 Korintiana 12,4: 6-2; 13 Korintiana 14).
Andriamanitra Trinite dia mankafy fifandraisana tonga lafatra toy izany amin'izy ireo ka nanapa-kevitra izy ireo fa tsy mitazona izany fifandraisana izany ho an'ny tenany manokana. Tena tsara loatra an'io! Andriamanitra Trio dia naniry ny hampiditra ny hafa amin'ny fifandraisany am-pitiavana mba hahafahan'ny hafa mankafy ity fiainana ity mandrakizay mandrakizay ho fanomezana maimaimpoana. Ny tanjon'ilay triatra an'Andriamanitra dia ny hizara ny fiainany mifaly amin'ny hafa no antony rehetra noforonina, ary indrindra indrindra amin'ny famoronana ny olombelona (Salamo 8, Hebreo 2,5: 8!). Izany no dikan'ny Testamenta Vaovao amin'ny teny hoe "manaiky" na "fananganan'anaka" (Galatiana 4,4-7; Efesiana 1,3-6; Romana 8,15-17.23). Ny Triune Andriamanitra dia nikasa ny hampiditra ny voary rehetra amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana an'Andriamanitra! Ny fifehezana dia Andriamanitra voalohany sy tokana noho ny zavatra rehetra noforonina! Eritrereto fotsiny ny vaovao tsaran'Andriamanitra amin'ny maha-planina "A" azy, izay misy "A" dia miankina amin'ny "fananganan'anaka"!
Satria Andriamanitra dia ny Andriamanitra telo izay iray, dia efa nisy talohan'ny namoronan'ny fahariana antsika. Fa ny fanontaniana mipoitra hoe: "Ahoana no hampidirana ny famoronana sy ny maha-olombelona ao amin'ny fifandraisan'Andriamanitra triatra raha ny Andriamanitra telo izay tsy nitondra ny famoronana tamin'ity fifandraisana ity?" Raha tsy Andriamanitra ianao dia tsy afaka ny ho tonga Andriamanitra mihitsy! Nisy zavatra noforonina TSY MAKAZY lasa zavatra tsy noforonina. Amin'ny lafiny sasany, Andriamanitra Trio dia tsy maintsy ho tonga biby ary mijanona ho zavaboary (raha mijanona amin'Andriamanitra amin'ny fotoana mitovy) raha tian'Andriamanitra hitondra antsika mandrakizay amin'ny fifandraisany iombonana isika ary hitazona antsika ao. Eto no nipoitra ny fidiran'i Jesosy, ilay Andriamanitra Andriamanitra. Andriamanitra, ny Zanaka dia tonga olombelona - midika izany fa tsy vokatry ny ezaka ataontsika manokana mba hahatonga antsika hifandray tsara amin'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra telo lehibe, ao amin'ny fahasoavany dia ahitana ny fahariana rehetra ao amin'i Jesosy, Zanak'Andriamanitra, amin'ny fifandraisany. Ny fomba tokana nitondrana ny fahariana eo amin'ny fifandraisan'ny andriamanitra telo dia ny hanetren'Andriamanitra ny tenany ao amin'i Jesosy sy ny fanekena ny famoronana amin'ny alàlan'ny asa an-tsitrapo sy an-tsitrapo. Io fihetsika nataon'ilay Andriamanitra telo io mba hiarahana malalaka amintsika amin'ny fifandraisan'izy ireo amin'ny alàlan'i Jesoa dia antsoina hoe "fahasoavana". (Efesiana 1,2: 2,4; 7: 2-3,18; Petera). Ny drafitr'andriamanitra natao ho tonga olona hisolo antsika dia midika fa ho tonga ho antsika i Jesosy na dia tsy nanota mihitsy aza! Namorona antsika Andriamanitra telo hanangana antsika! Tsy Andriamanitra no namorona antsika hanafaka antsika amin'ny ota, na dia nahavonjy antsika tamin'ny ota tokoa Andriamanitra. Jesosy Kristy dia TSY "Drafitra B" na fananana ananan'Andriamanitra. Tsy plaster ampiasaina fotsiny izy io mba handrakofana ny olantsika. Ny fahamarinana manaitra dia ny hoe Jesosy no voalohany an'Andriamanitra ary TSY MISY nihevitra antsika hitondra antsika hifandraisany amin'Andriamanitra. Jesosy dia ny fahatanterahan'ny "Drafitra A" izay natomboka talohan'ny nahariana an'izao tontolo izao (Efesiana 1,5: 6-13,8; Apokalypsy). Jesosy dia tonga mba hampiditra antsika ao amin'ny fifandraisan'Andriamanitra Triune, araka ny nikasan'Andriamanitra azy hatrany am-piandohana, ary tsy nisy na inona na inona, na dia ny fahotantsika aza. Voavonjy ao amin'i Jesosy daholo isika (1 Timoty 4,9: 10) satria te-hanatanteraka ny drafi-panabeazana Andriamanitra! Andriamanitra Triatra nametraka io drafitra fananganan-anaka io an'i Jesosy talohan'ny nahariana antsika, ary efa zanaky ny zanak'Andriamanitra efa natsangana isika (Galatiana 4,4-7; Efesiana 1,3-6; Romana 8,15-17.23).
Ity drafitry ny Trio ity hampiasa ny zavaboary rehetra ho fifandraisana amin'i Kristy amin'ny alalany dia indray tsiambaratelo izay tsy nisy nahalala (Kolosiana 1, 24-29). Na izany aza, taorian'ny niakaran'i Jesosy tany an-danitra, dia nandefa ny Fanahy Masin'ny Fahamarinana izy hanambara izany fidirana sy fidirana amin'ny fiainan'Andriamanitra izany (Jaona 16, 5-15). Tamin'ny alàlan'ny fampianaran'ny Fanahy Masina, izay efa narotsaka tamin'ny olombelona rehetra ankehitriny (Asan’ny Apostoly 2,17) sy ny mpino izay mino sy miarahaba an’io fahamarinana io (Efesiana 1,11: 14), izany zava-miafina izany dia ampahafantarina maneran-tany (Kolosiana 1,3-6)! Raha tsy takonao io fahamarinana io dia tsy afaka manaiky azy isika ary hiaina ny fahalalahany. Fa kosa, mino izahay fa lainga ary iharam-boina amin'ny olana misy amin'ny fifandraisana ratsy (Romana 3, 9-20; Romana 5,12: 19!). Rehefa mianatra ny marina momba an'i Jesosy isika dia hanomboka hahatsapa fa mpanota tsy ny fahitana an'i Jesosy amin'ny firaisana amin'ny olona rehetra eran'izao tontolo izao. (Jaona 14,20:1; 5,14 Korintiana 16: 4,6; Efesiana!). Tian'Andriamanitra hahafantatra ny tsirairay hoe iza izy ary iza isika ao aminy (1 Timoty 2,1: 8)! Ity no vaovao tsaran'ny fahasoavany ao amin'i Jesosy (Asan’ny Apostoly 20, 24).
Raha ny teolojika, mifototra amin'ny olona an'i Jesosy, tsy anjarantsika ny mamonjy "olona". Te hanampy azy ireo hahafantatra izahay fa iza i Jesosy ary efa ao anatiny izy - zaza natsangan'Andriamanitra! Raha ny tena izy dia tianay ho fantatrao fa efa avy amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy ianao ary hamporisika anao hino fa mitondra tena tsara ianao ary voavonjy!